Miyuu suurtogal ah in uu iibsado GOV backlinks?
Marka ay timaado awoodda ugu awoodda badan ee shabakadaha internetka iyo boggaga internetka, halkan waa hal shay oo aad fahmi karto marka hore iyo ugu horreyn. Xaqiiqdu waxay tahay in aadan dhab ahaantii iibsan karin GOV backlinks, waxaad kaliya ku kasban kartaa iyaga. Taasi waa sababta hoosta aan u socdo inaan kuu muujiyo habka aad u kasbatay dib-u-qabashada qiimaha leh dhowr siyaabood oo la adeegsan karo oo aan dhowaan tijaabiyey website-kayga. Taasi waxay noqon laheyd shaqo waqti-gaaban, waa in aan qirto. Laakiin waxaad weli rabtaa inaad ku raaxaysato awoodda awoodda ee awoodda leh, miyaadan ahayn? Sidaa daraadeed, halkan waa sida aad u gadan karto GOV-Backlinks - inaad maalgeliso wakhtiga iyo dadaalkaaga mid ka mid ah kuwaan soo socda: faallo ku saabsan qoraalada xukuumada, qorista ku saabsan hay'ad dawladeed ama qaybo kale oo la xidhiidha, wareysiga hay'ad ama xubin bulshada, dhisida bogga khayraadka, iyo sidoo kale wadahadal dhiira galin ah si loo helo dib-u-habeynta loo baahan yahay. Sidaa daraadeed, aan dib u eegno kiis kasta oo u ogolaan kara inaad ka iibsatid GOV-backlinks - inaad bixiso fooshaada taas.
Faallooyinka Dawladeed ee Dawladda
Ka tagista faallooyinka ee GOV blogs ayaa ka mid ah hababka ugu caamsan ee lagu helo dawladaha dawladaha hoose. Si la mid ah falanqaynta meelo kale oo internet ah, si kastaba ha ahaatee, hawshu maaha mid u fudud sida laga yaabo inay u muuqato in jaleecada hore. Waxyaabuhu waxay tahay in qaybta libaaxyada ee shabakadaha la xidhiidha looma oggola inay faallo ka bixiyaan, ama ugu yaraan waxay u badan tahay inay bixiyaan keli ah oo aan la socon. Sidaa darteed, waa inaad waqti badan ku bixisaa si aad u hesho musharaxiinta saxda ah si aad u hesho faallooyin faallo ah. Taasi waxay noqon kartaa tan ugu dhib badan halkan.
Qoritaanka Hay'adda ama Hay'adda la Xiriira
Ku soo dhawow fiiri boggaga ama blog-kaaga - qor maqaal wacan oo ku saabsan hay'ad dawladeed ama hay'adeeda la xidhiidha. Waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale qori karto siyaasi - wareysi xubin wakaalad ah, ama saameyn bulsho oo weyn ayaa sidoo kale ah hab loo adeegsan karo si loo kabo dhabarka. Tusaale ahaan, abuuritaanka qodob nuuc ah ama dood ku saabsan Qaybta Tamarta ayaa noqon doonta go'aan aad u wanaagsan oo loogu talagalay kuwa dhisaya tamarta tamarta tamarta, mashiinada, ama ku lug leh warshadaha kale ee isbahaysiga ah iyo kuwo aad u sarreeya. Kuwa ka shaqeeya, tusaale ahaan, kiimikada ama farmashiyaha waxay ku heli karaan xiriir fiican oo leh Hay'adaha Ilaalinta Deegaanka, ama Ururada Caafimaadka ee ay hayso Dawladaha.
Wargelinta Hay'ad ama Xubin Jaaliyadeed
Sida badan oo hore, wareysiga siyaasiinta ama qaar ka mid ah saamileyda la xidhiidha ayaa sidoo kale ah fursad fiican oo dib loogu soo celiyo goobaha dowladda. Dhamaan waxaad u baahan tahay halkan inaad u sheegto qofka la wareystay iyo wax walba oo horayba loo dejiyey - ka hor intaadan bilaabin ka shaqaynta maqaalkan qiimaha leh iyo ugu dambeyntii helitaanka isku xirka boggaaga ama bloggaaga. Tilmaam: tixgelin inaad dooratid sharciyada cusub ee la soo jeediyey ee la filayo in ay saameeyaan mashruucaaga internetka ama ganacsiga guud ahaan.
Dhismaha Khayraadka Dhismaha
Iyada oo ku xidhan niche, dhisida bogga khayraadka ayaa mararka qaarkood noqon kara xal dhab ah. Xaaladaha qaarkood, tusaale ahaan ganacsiyada maxalliga ah, tixgeliyaan bogagga khayraadka si ay u bixiyaan macluumaad wax ku ool ah oo ku saabsan sharciga degaanka ama xeerarka rasmiga ah ee faa'iido u yeelan kara isticmaalayaasha maxaliga ah. Sidoo kale, ka feker inaad hesho liistada boggaga hore ee ilaha hore u leh oo ay ku badan yihiin bogagga internetka ee dowladda.
Ka dib oo dhan, dhirbaaxadu marwalba waa hab balanqaad ah oo la xaqiijiyey si looga iibsado GOV backlinks ee hay'adaha dawladda. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa inaad heshaa dhibcaha saxda ah ee muhiimka ah ee ugu sarreeya ee hadda jira - oo kaliya ku qeexan waxa ku qoran waxa ay doonayaan inay maqlaan. Dabcan, waa inaad dareentaa dareenka dhabta ah ee kooraska - iyo inaad kor u qaadatid qaybtaada maadada si joogto ah intii aad awooddo Source .